निशाको मेहन्दीमा को-को पुगे ? हेनुस् फोटो ग्यालरी « Ramailo छ
निशाको मेहन्दीमा को-को पुगे ? हेनुस् फोटो ग्यालरी
नायिका निशा अधिकारीले मेहन्दी लगाएकी छिन् । यही शुक्रबार प्रेमी शरद भेषवाकरसँग विवाह गर्न लागेकी निशाले बुधबार हातमा मेहन्दी लगाएकी हुन् । निशाको मेहन्दीमा बेहुला शरद सहित पुर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बा, नायिका रिमा विश्वकर्मा, बेनिशा हमाल, निर्देशक सिमोश सुनुवार, निलु डोल्मा शेर्पा लगायत उपस्थित छन् । बिहेपछि निशा र शरदले आउँदो बआइतबार रिसेप्सन पार्टी दिदैंछन् । हेर्नुस् निशाको मेहन्दीका केही तस्बिरहरु :